‘नीलो ताजमा नजर’ – Himal FM 90.2 MHz
‘नीलो ताजमा नजर’
कला र साहित्य Author May 18, 2014
सबिन लिम्बू, मिस नेपाल वर्ल्ड २०१४
कत्तिको खुसी हुनुहुन्छ?
शब्दमा व्यक्त गर्न सकिरहेकी छैन। मेरो नाम उद्घोष भएको निकै समयसम्म सपना हो कि बिपना भन्ने छुट्याउन गाह्रो भयो। धेरै खुसी हुँदा पनि खुसीको अनुभव बटुल्न नपाइने रहेछ।
पछि कसरी मनाइयो त खुसी?
अहिलेसम्म खुलेर खुसी मनाउन पाएकै छैन। साथीभाइ, आफन्त र मिडियाले व्यस्त बनाइरहेका छन्।
जित्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्थ्यो?
आशा त सबैलाई हुन्छ। तर, सबैजना उत्तिकै क्षमतावान् हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले नै जित्छु भन्ने लागेको थिएन।
टप टेन, टप फाइभजस्ता राउन्डका लागि नाम उच्चारण गर्दा र फाइनल घोषणा गर्नुअघि मुटुको वेग कत्तिको बढ्दो रहेछ?
टप टेन र टप फाइभसम्म पुग्दा ट्रेनिङ गरेजस्तो भइरहेको थियो। त्यसैले त्यति धेरै मुटु हल्लिएन। फाइनल नाम घोषणा गर्नुअघि आत्मसन्तुष्टिले काम गरिररहेको थियो। किनभने, मुख्य जज पूर्वसेनापति रुक्मांगद कटुवालले गर्नुभएको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेकी थिएँ।
संयोगले तपाईंलाई टप फाइभमा पर्नका लागि र मिस नेपाल जित्नका लागि पनि युवासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू परे। यो विषयमा तयारी गर्नुभएको थियो?
नेपाली युवा र बेरोजगारीको समस्या नेपालका जल्दाबल्दा विषय हुन् भन्ने मलाई थाहा थियो। यो विषयमा केही पूर्वतयारी गरेकी थिएँ।
मिस नेपाल बन्ने सपना पहिलेदेखिकै हो?
ब्युटी पेजेन्टमा सहभागी पहिलेदेखि नै हुँदै आएकी थिएँ। सन् २०१० मा आफ्नै समुदायको भएर मिस मंगोलमा सहभागी भएँ। यसले मोडलिङमात्रै होइन, अरू क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने लाग्यो। मिस नेपालमा आफूलाई …ग्रुमिङ’ गर्न सहभागी भएकी थिएँ।
मिस नेपाल जितेपछि तपाईं सेलिब्रिटी हुनुभएको छ। अब तपाईंका पुराना लक्ष्य कति परिवर्तन हुन्छन्?
म मेरो लक्ष्यमा दृढ छु। कर्पाेरेट क्षेत्रमा केही गर्ने पुरानो लक्ष्य पूरा गर्न यो टाइटल सहयोगी हुनेछ। उद्देश्य भने फराकिलो भएको छ। हिजो आफ्नालागि मात्रै सोच्थेँ भने आज नेपालका सबै युवाका लागि सोच्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध भएको छ। सपना पनि बढ्दै गएका छन्।
अब तपाईंको प्राथमिकता के हुन्छ?
मिस नेपालको ताज मेरो शिरमा छ। तर, मेरो आँखा मिस वर्ल्डको नीलो ताजमा गइरहेको छ। त्यो जित्नु मेरो प्राथमिकता हो। नेपालमा अहिले क्रिकेटको जस्तो चार्म छ, अब त्यस्तै चार्म मिस वर्ल्डमा सफलता पाएर ल्याउन मन छ।
अघिल्ला मिस नेपालले पाएको सफलताले तपाईंलाई अझ अघि बढ्ने चुनौती पनि छ, है?
सबैले यसलाई चुनौती भन्छन्। म चाहिँ यसलाई प्रेरणा भन्छु। किनभने, उहाँहरूले त्यो सफलता हासिल गरेर हामीलाई आशावादी बनाइदिनुभएको छ।
तपाईंको परिवारका सबै सदस्य विदेशमा हुनुहुन्छ। तपाईंमात्रै नेपाल हुनुहुन्छ, हैन?
मेरो बाबाको ठूलो हात छ यसमा। उहाँले विदेशमा सुविधा भए पनि दुःख बढी छ भन्नुभयो। विदेशमा जान कर गर्नुभएन। अहिले आएर ठीक कुरा गर्नुभएको रहेछ भन्ने लाग्दै छ।
बिजनेसतिर चाहिँ कसरी रुचि जाग्यो?
हाम्रो समुदायका अधिकांश पुरुष लाहुरे हुनुहुन्छ। पैसा त कमाउनुहुन्छ तर परिवारसँग टाढा रहनुपर्छ। धरानमै हुर्कंदा मैले मारवाडी समुदायलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएँ। परिवारसँगै बसेर पैसा कमाइरहेका हुन्छन् उनीहरू। त्यसैले मैले बिजनेस गर्ने लक्ष्य लिएँ।
अभिनय र मोडलिङ क्षेत्रमा कत्तिको रुचि छ?
पहिले पनि मोडलिङ गरेकी थिएँ तर पढाइलाई हानि पुग्ने भएर बीचमा ग्याप भयो। अहिले भने मोडलिङ र फिल्ममा अभिनय गर्ने कुरामा केही सोचेकी छैन। यति बेला प्रमुख उद्देश्यमै बढी केन्द्रित हुन्छु।
@ nagarik national daily